जाडोमा दिनदिनै ओखर खानुका फाइदा, छुटकारा पाउनुहाेस् यस्ता थुप्रै समस्या बाट ! - ज्ञानविज्ञान
ओखर हामीले देखी, खाइ आएको फल हो । प्राय हामीले तिहारको समयमा प्रयोग गर्ने यो फल अन्य समयमा हामीले खासै वास्ता गर्दैनौ तर, अब ओखरलाई पनि हाम्रा अन्य फल जस्तै खाइरहने फल बनाउनु फाइदा जनक देखिएको छ ।
केही समय अघि गरिएको अध्ययनमा ओखरले दिने स्वास्थ्यका फाइदाका कारण पनि ओखरलाई दैनिक जीवनमा समावेश गर्नु फाइदाकर हुने भएको छ ।
ओखरले के-के फाइदा गर्छ त ?
स्तन क्यान्सरको खतरा कम
ओखरको नियमित प्रयोगले स्तन क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ । मार्सल विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार ६० ग्राम ओखर दिनहुँ खाने गरे स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुन्छ ।
ओखरमा एन्टी अक्सिडेन्ट नामक तत्व हुन्छ जसले कपाल तथा त्वचा सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै बढ्दो उमेरमा हुने चाउरीपनाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ
मधुमेहका बिरामीहरुका लागि ओखरले एक औषधिको रुपमा कााम गर्छ । त्यसैले मधुमेहका बिरामीहरुका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
मुटुलाई पनि फाइदा
ओखरको प्रयोगले मुटूलाई समेत फाइदा गर्छ । एक दिनमा ४ –५ वटा ओखरको सेवन गर्नाले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छ ।
तनाव कम गर्न मद्धत गर्छ
ओखरको सेवनले मानसिक समस्या कम गर्नुका साथै तनावबाट मुक्ति मिल्छ । तनावसँग लड्ने क्षमतामा बृद्धि गर्छ । यसमा भएको तेलले ब्लड प्रेसर र त्यसको प्रभावलाई कम गर्न मद्धत गर्छ र तनाव कम हुन्छ । यसको नियमित सेवन गर्नाले मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाईराख्न मद्दत गर्छ ।
कब्जियत समस्याबाट मुक्ति
ओखरमा पाइने मोनो र पालीअनस्याचुरेट फ्याटले शरिरको इन्सुलिन सेन्सेटिभीटीलाई राम्रो फाइदा पुर्याउँछ ।
उक्त हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अनुसन्धानमा के पत्ता लागेको छ भने जुन महिलाहरूले हप्तामा पाँच पटक ३० ग्राम ओखर खाने गर्छन् उनीहरुलाई टाइप २ मधुमेह हुने खतरा ३० प्रतिशत कम हुन्छ ।
Topics #ओखर खानुका फाइदा #ओखरले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदा #जाडोमा दिनदिनै ओखर खानुका फाइदा
Don't Miss it विचार गर्नुहोस् ! बिहान अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग
ढिलो सन्तान जन्माउने महिलाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
सन्तुलित खाना खानुहोस् शरिरको फ्याटलाई सदैब सन्तुलित राख्नुहोस् । धेरै बढी पनि होइन, कम पनि होइन । बढी तौल र…